I-AAM_Imper atypical bubble eduze ne-Paris - I-Airbnb
I-AAM_Imper atypical bubble eduze ne-Paris
Houilles, Île-de-France, i-France
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Christophe izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Topaze - iyindawo yokuhlala ethokomele futhi eyakhiwe ngo-23mwagen esendaweni engaphansi enefenisha ephelele yendlu yokuhlala nemizuzu engu-3 uhamba ngezinyawo ukusuka esiteshini sase-SNCF sase-illes. Ngekamelo layo elizimele, lingathatha abantu abangaba ngu-3 futhi lingafinyelela e-Paris emizuzwini engu-15, i-Nanterre nekamelo lezinkundla zemidlalo emizuzwini engu-5.
Qaphela : Itholakala onqenqemeni lwesitimela, umoya nomsindo wesitimela ngeke ufaneleke kuwo wonke umuntu, kuhlanganise nomsindo ozwakalayo kanye nedolobha ngokujwayelekile.
Ilungele ukuhlala kwakho e-Losilles noma ukuvakashela i-Paris, leli fulethi litholakala ngaphansi kwendlu yedolobha eguquliwe ngokunambitheka !
Ezinye zezindawo zokuhlala kwakho kwase-Paris: hlala nomndeni wakho, ukuqeqeshwa noma umsebenzi oseduze, ikhonsathi ehholo lezinkundla zezinkundla ze-La Défense, noma uvakashele inhloko-dolobha, uzothanda ukuzithola kule ndawo yokuhlala ethokomele ezokuvumela ukuba ululame futhi ujabulele ngokugcwele izikhathi zakho zokuphumula.
Ngalokhu, uzoba nokubhukha kwakho :
Uhlangothi lwekamelo – Izinto zombhede zekhwalithi ephezulu ezinomatilasi omkhulu ongu-140 x 190 uzotholakala kuwe, njengoba iholide noma ukuvakasha komsebenzi kuqala ngekhwalithi yobusuku! Ithelevishini ikhona egumbini ukuze ikunikeze ukunethezeka okuqinisekisiwe!
Uhlangothi lwekamelo lokuphumula - uxhumano lwe-wifi olunesivinini esiphezulu ukuze useshe i-injini yakho yokusesha oyithandayo ukuze uhlele ukuhlala kwakho. I-TV ivumela ukuthola zonke iziteshi ze-DTT. Ibhentshi lombhede elingu- x 90 livumela ukuhlalisa umuntu wesithathu ngokunethezeka, ngomatilasi wekhwalithi.
Indawo yayo ekamelweni elakhelwe ngaphansi yenza ukwazi ukugcina ubumnandi obumnandi kakhulu esimweni sezulu esifudumele.
Ohlangothini lwekhishi – uzokwehliswa yikhwalithi yemishini yekhishi elincane: ifriji, isitofu esishisayo esinamaphesenti amabili nesitofu sayo sokukhipha, i-microwave, uhhavini nomshini wekhofi we-Nespresso. Zonke izitsha ezidingekayo nekhwalithi ziyatholakala ukuze uyisebenzise ngokugcwele le ndawo.
Itafula elingu-80 x 110 livumela abahlali ukuba bajabulele ukudla ndawonye. Ngamafuphi, ikhishi elinakho konke, elihlanzekile futhi elisebenzayo ukuze uqale usuku kahle noma uthole ukunethezeka ngemva kosuku olubi!
Uhlangothi lwegumbi lokugezela – ubukhazikhazi obunesibuko esikhanyayo, umshini wokomisa amathawula neshawa enkulu ngemibala emihle.
Ukugqanyiswa kwendawo - unekamelo lokulala elihlukile ngokuphelele, indlu yangasese negumbi lokugezela, okukunikeza ukunethezeka okuphezulu nobumfihlo kuye ngokuthi uzobe wabelana nohambo lwakho nobani!
Ukuze siqinisekise ukuthi unenhlalakahle enkulu, siye sazama ukucabanga ngazo zonke izidingo zakho: ibhodi loku-ayina neloku-ayina, indawo yokomisa izingubo, umshini wokomisa izinwele uyatholakala !
Okokugcina, ukungena kungaba ukuzingenela ngenxa yebhokisi lesikhiye lendlu, okukuvumela ukubambezeleka okungalindelekile nokungena okushintshashintsha nezimo, ngisho nokubhukha ngomzuzu wokugcina!
Amaradiyetha afudunyeziwe ahlanganiswe nezinto zekhwalithi, azokulethela umuzwa wokunethezeka ongenakuqhathaniswa.
Ngokubhukha kwakho, uyanikezwa:
- Izinto ezidingekayo ekuhlaleni kwakho (insipho, i-shower gel, amathawula, amalineni, ithawula lezitsha, uketshezi lokugeza izitsha, isipontshi, iphepha lasendlini yangasese) - okukuvumela ukuba uhambe ngokukhanya nokuzola;
- Ukuxhumeka okungenazintambo - ukuze uhlale uxhumene nendawo okuyo.
Ifulethi litholakala ngemizuzu emithathu uma uhamba ngezinyawo ukusuka esiteshini sesitimela sase-SNCF kanye nesiteshi sebhasi, futhi lihlala liseduze nezitolo eziningi eziseduze.
Ingabe unezintambo eziluhlaza okwesibhakabhaka? Imakethe yangaphakathi nangaphandle, enye yezindawo ezinkulu kunazo zonke e-Metropolitan France, etholakala ku-500M ukusuka endaweni yokuhlala enkabeni yedolobha, izokukwamukela ngoLwesithathu nangoMgqibelo ekuseni. Nuka iphunga futhi uthole imikhiqizo yenkukhu yethu, umkhiqizo wokuqala, abathengisi bezinhlanzi, abenzi boshizi noma ngisho nabathengisi bezingubo zale ndawo ethandwayo ye-Ovillois!
Ingabe uyashesha futhi awunaso isikhathi esiningi? Eduze nefulethi uzothola uhlobo oluhlukile lwezindawo zokudlela, izimakethe ezinkulu noma izitolo ezingokwemvelo.
Ekugcineni, i-Rug 's & Coffee izokuvumela ukuthi ube nesiphuzo endaweni enhle nehlotshisiwe!
Ukuhlala eduze nendlu, sizotholakala uma kudingeka nganoma yimiphi imibuzo mayelana nokuthi indlu isebenza kanjani noma ukuphila kwasendaweni ngokujwayelekile.
Siyazi i-Paris nesifunda sayo ngokuphelele, futhi sizojabula ukukusiza uhlele ukuhlala kwakho futhi sithole amakheli afanele okuhlela ukuphila kwakho kwansuku zonke. Sikhona ukuze sikusize ngalokho !